Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa cambaareeyay afduubka iyo dilka lagula kacay ilaa iyo 8 qof oo ah howlwadeenno caafimaad oo ka ahaa magaalada Balcad.
Afduubka raggan ayaa dhacay Arbacadii saacad ka dib markii uu halkaasi ka dhacay qarax lala eegtay milatariga Soomaaliya. Wali ma cadda cidda laysay raggaasi. Waxaan qoraalkan ku soo koobeynaa waxyaabaha aan ogsoon nahay ilaa iyo hadda.
Siday wax u dhaceen
Duhurnimadii Arbacadii la soo dhaafay ayay ahayd markii rag hubeysan ay yimaadeen xarun caafimaad oo hay’adda Zamzam Foundation ay ku leedahay deegaanka Gololey ee duleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe.
Raggaasi ayaa markii dambe xaruntaasi ka kaxaystay toddobo ka mid ah halwadeenno caafimaad oo xaruntaasi ka shaqeynayay iyo qof ka mid ah dadka deegaanka, sida ay goobjoogayaal sheegeen.
Maalin ka dib ayaa meydadka siddeeddaasi qof laga helay duleedka deegaanka laga qafaashay.
Cumar Jaamac, agaasimaha guud ee hay’addaasi ZamZam Foundation, ayaa BBC-da u sheegay in shaqaalahaasi laga qafaashay xarunta ay ahaayeen wiilal dhallinyaro ah oo ka hawlgalayay xaruntaasi.
“Wiilashan waxay ahaaayeen shaqaale caafiamad oo ka shaqeynayay xarunta oo u shaqeeya hay’adda. Dhibka markii uu dhacayayna waxay ku sugnaayeen xarunta oo ah halka laga kaxeystay. Ciidan lebisan oo wajiyada u xirtay si aan loo garan ayaa xarunta soo galay, dabadeedna kaxeystay,” ayuu yiri Cumar.
Sidoo kale Cumar waxa uu sheegay in ciidamadani ay handadeen dumarkii ku sugnaa xarunta.
“Xaruntu rag iyo dumarba waa ay ka shaqeynayeen, raggii dhallinyarada ahaa ayay kaxeysteen, dumarkii taleefoonnadii ayay ka qaateen waa ay ka tageen. Dabadeetana qof kale oo deegaanka ah ayay horey u kaxaysteen lama garanin meesha ay la aadeen….ugu dambeyn waxaa la helay meydadkii dhallinyaradii dhammaan oo la dilay oo ay ka muuqdaan raasaas.”
Lama oga wali. Meydadka dhallinyaradaasi ayaa xalay la geeyay magaalada Muqdisho, si halkaasi ugu tusaan ciidamada dambi baarista, waxaase markii dambe lagu celiyay degmada Balcad halkaasi oo lagu aasay.
Dad ku sugnaa xarunta hay’addani markii dhallinyaradani la qafaalanayay ayaa BBC-da u sheegay in shan nin oo hubeysan oo saddex ka mid ah ay xiran yihiin dareyska ciidamada dowladda Soomaaliya ay xarunta ka soo galeen qeybta dambe.
Raggan ayaa markii ay xarunta soo galeen la kulmay dhallinyaradaasi oo qadeynaya, waxayna u sheegeen in ay yihiin amiirrada cusub ee Al-Shabaab ee deegaankaasi loo soo magacaabay.
Raggaasi dableyda ahi ayay BBC-du ogaatay in ay markiiba indhaha u duubeen dhallinyaradaasi ka hor inta aysan aadin dhanka gabdho iyagana xaruntaasi ka shaqeynayay.
Waxay gabdhahaasi weydiiyeen magacyada laba qof oo ay wateen oo midkood la sheegay in uu yahay nin darawal ah oo dadka bukaanka ah u soo qaada xaruntani caafimaad.
Handadaad ka dib, raggaasi waxay horey u sii kaxeysteen dhallinyaradii toddobada ahayd iyo nin ka tirsan dadka deegaanka, kuwaas oo ay indhaha u duuban yihiin isla markaana qaarkood ay isku xirxiran yihiin.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in dhallinyaradaasi ay dableydaasi markii dambe la aadeen dhanka waddada Jowhar, iyagoo sida la sheegay markii dambe ku qaaday baabuur nooca Soomaalidu ay u taqaan Hoomeey. Saacado ka dib waxaa la maqlay dhawaqa rasaas aan horey loo maqli jirin, taa oo la rumeysan yahay in ay ahayd tii lagu dilay siddeeddaa qof ee rayidka ah.
Dhacdadaan ayaa noqotay mid aad looga hadal hayo gudaha Soomaaliya iyo dibadduna, waxaana dadku isweydiinayaan ujeedad loo bartilmaameedsaday shaqaale caafimaad xilli haatan uu dunida fara ba’an ku hayo cudurka Covid-19.
Ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey ayaa si xoogan u cambaareeyay dilka siddeeddaasi qof.
Waxaa uu soo jeediyay in baaritaan hufan lagu sameeyo dhacdada lagu dilay dhalinyarada.
“Marnaba lama aqbali karo in la weeraro shaqaalaha caafimaadka taasi oo xaadgudub ku ah xeerarka arrimaha banii’aadanimada”
Qaramada Midoobey waxay sidoo kale sheegtay in dilka howlwadeennadan caafimaadka uu imaanayo xilli dowladda Soomaaliya ay la daala dhaceyso xakameynta safmarka Korona, wax ka qabashada daadadka iyo saameynta ayaxa.
Ma cadda cidda afduubatay iyo cidda ka dambeysa dilkooda toona balse dadka qaar ayaa arrintan ku eedeeyay ciidamada dowladda haseyeeshee milatariga Soomaaliya ayaa eedeymahaasi ku gacan seyray, waxaana maamulka gobolkaasi uu dhacdadan ku eedeeyay ururka Al-Shabaab.
Dhanka kale, warbaahinta u janjeerta dhanka Al-Shabaabka ayaa dhacdadaasi ku eedeeysay ciidamada dowladda Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya oo ku baaqday baaritaan deg deg ah ayaan wali sheegin cida ay ku tuhunsan tahay dilkaasi.
Todoba ka mid ah sideed qof ee la dilay waxa ay ahaayeen kalkaaliyayaal caafimaad ka hawlgeli jiray xarun caafimaad oo ay maamusha Zamzam Foundation. Magacyada ragga la dilay waxay kala yihiin:
Maxamed Cumar Boore
Cumar Xuuti Maxamud
Nuur Xaaji Gaas
C/saaq Cabdulaahi Xuseen
Cabdicasis Cabdulqaadir Cabdulle.
Cali Axmed Cali.
Abuukar Muuse Maaxi.
Yuusuf Ayuub Cabdullaahi
Xarunta caafimaad ee ay ka shaqeynayeen ayaa bixineysay adeegyo cafimaad sida: Hooyada iyo dhalaanka, sida inay haweenku ku umulaan, dawo iyo nafaqana ka heli jireen dhallaanka. Waxay sidoo kale xarrunta caafimaad siisaa adeeg bilaash ah dadka waaweyn e bukaan socotka ah.